Hoggaamiye Xilka ‘Madaxweyne’ Iska Casishay Maalin Ka Dib Markii Loo Dhaariyey | Himilo Media Group
Hoggaamiye Xilka ‘Madaxweyne’ Iska Casishay Maalin Ka Dib Markii Loo Dhaariyey
Lima, 03 Oct, 2019 (Himilo)-Mercedes Aráoz waxa loo magacaabay hoggaamiyaha ku-meel-gaadhka ah maalintii Isniinta ee la soo toddobaadkan, waxaanay aheyd dib u gurasho aan la fileyn inay haweeneyda Baarlamaanka Peru u magacaabeen in ay noqoto ‘kusimaha Madaxweynaha’ ay markiiba iska casisho saacado yar ka dib markii xilka loo dhaariyey.
Dhaarinta Mercedes Aráoz waxa ka dambeeyay xildhibaano ka hor yimid go’aanka Madaxweyne Martín Vizcarra oo kala diray xildhibaannada, shaqadana ka joojiyey.
Tallaabada lagu dhaariyey waxay ka dhignayd in Peru uu si kooban u yeeshay laba siyaasi oo kala sheeganayay xilka Madaxweynaha, Iyadoo uu jiray qallalaase dastuuri ah, haddana inta badan xaaladda Peru ayaa deggan.
Ms Aráoz waxay aheyd Madaxweyne ku xigeenkii Mr Vizcarra, illaa uu ka billaabmayey khilaafka sababay in Madaxweynaha uu ku go’aansado inuu baarlamaanka kala diro.
Waxa xilka u dhiibay xildhibaannada mucaaradka ah oo ku doodaya in Mr Vizcarra uu jebiyay dastuurka, waxayna ku dhawaaqeen inuu xilkiisa bannaan yahay, waxaanay sheegeen in shaqada xafiiska madaxweynaha muddo sannad ah ka joojiyeen Mr Vizcarra, balse dowladda waxay ku doodeysaa in codeynta baarlamaanka ay dhacday ka dib go’aankii madaxweynaha uu Baarlamaanka ku kala diray, tallaabadaasna ay tahay waxba kama jiraan.
Maxay Ms Aráoz sheegtay?
Warqad ku qorneyd Afka Spanish-ka oo lagu daabacay Twitter-ka, ayey Ms Aráoz ku sheegtay in ay iska casishay waxaanay tidhi, “Sii hayaha xilka Madaxweynaha”, ka dib markii Urur Gobolleedka Dalalka qaaradda Amerika OAS uu sheegay in maxkamadda sare ee Peru ay u taallo go’aan ka gaadhidda, haddii sharci ay tahay kala diridda baarlamaanka.
Waxaanay sheegtay in sidoo kale ay iska casishay xilkeeda madaxweyne ku xigeenka iyadoo eegeysa amarka dastuurka ee la jebiyey. Iyadoo barteeda Twitter-ka ku qortay in ay rajeyneyso in iscasilaaddeeda ay waddada u xaadho qabashada doorasho guud.
Hadda yaa dalka maamula?
Ka dib iscasilaaddii Ms Aráoz, waxay u muuqataa in Mr Vizcarra uu si aayar ah ugu soo noqonayo awoodda maamulka, kadib markii uu soo saaray go’aanka uu ku kala diray Baarlamaanka, wuxuu taageero ka helay Taliyeyaasha ciidammada millatariga iyo booliska. Sidoo kale qiyaastii 2,000 oo qof ayaa isugu soo baxay jidadka caasimadda Peru ee Lima iyo magaalooyiin kale, si taageero ay ugu muujiyaan Mr Vizcarra.
Sidoo kale, tobannaan ka mid ah gudoomiyayaasha gobollada ayaa taageeray Mr Vizcarra.
Muxuu Madaxweyne Vizcarra u kala diray xildhibaannada?
Tallaabada waxay timid ka dib bilo is hor taagnaan ah oo ka dhalatay mucaaradka oo maamula Baarlamaanka, ay is hortaageen sharciga caan baxay ee la dagaallanka Musuqa, kaas oo uu riixayo Madaxweynaha.
Mr Vizcarra wuxuu xilka madaxweynaha qabtay bishii March 2018-kii, ka dib markii madaxweynihii xilligaas, Pedro Pablo Kuczynski, uu is casilay kaas oo lagu eedeyay inuu codadka iibsaday, iyadoo afar madaxweyne oo hore ay wajahayaan baadhitaanno la xidhiiidha musuqmaasuq, ayuu Mr Vizcarra u sheegay dadka Peru inuu ajandisiisa siyaasadeed ee ugu horreeya uu yahay arrintaas.